रवि लामिछानेलाई कलाकारहरुको समर्थन (भिडियोसहित) | Kendrabindu Nepal Online News
७ भाद्र २०७६, शनिबार १३:५०
पत्रकार शालिकराम मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका अर्का पत्रकारद्वय रवि लामिछाने र युवराज कंडेलको पक्षमा कलाकारहरुले आवाज उठाएका छन्। कलाकारहरुले आज रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै घटनाको निस्पक्ष ढंगले अनुसन्धान गर्न माग गरेका हुन्।
हास्यकलाकार दीपकराज गिरीले आफूले पनि सोही प्रकृतिको पीडा भोगेको बताउंदै आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले बोलेका सबै कुरा सही नहुने बताए। “आफू केही गर्न नसकेर मर्छन अनि अरुलाई फसाउन खोज्छन्।” गिरीले भने। एक जना मूर्ख मान्छेले बाचुन्जेल मात्रै होइन मरेपछि पनि सबै गाउँलेलाई प्रहरी हिरासत पुर्याएर दु:ख दिएको प्रसङ्ग सुनाउंदै उनले कानूनको सही प्रयोग हुनुपर्ने बताए।
त्यस्तै कलाकार निखिल उप्रेतीले नेपालमा कुनै राजनीतिक दलको झण्डा नबोकी राष्ट्रिय झण्डामूनि बस्नेहरुको हालत रवि लामिछानेको जस्तै हुने बताए। सत्य र निष्ठावान व्यक्तिलाई खत्तम पार्न राजनीतिक दलका नेतृत्वहरु नै लाग्नु विडम्बना भएको बताउंदै उनले भने, “नेपालको कानून गलत होइन तर कानूनको व्याख्या गर्नेहरु गलत देखिए ।”
त्यस्तै अर्का कलाकार रमेश उप्रेतीले पनि विना कुनै दबाव अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्। रवि लामिछानेले प्रहरीलाई अनुसन्धानकालागि सहयोग गर्ने बताइरहेका बेला जबरजस्ती हिरासतमा राख्नु आवश्यक नभएको बताए।
कलाकारहरु स्वेता खड्का, रामकृष्ण ढकाल, प्रमोद खरेललगायतले चितवन प्रहरी कार्यालयमै गएर रविलाई भेटेका थिए।
शालिकराम मृत्यु प्रकरण: किन नल्याउने सूचना प्रविधि ऐन ?
रविको प्रश्न- ‘अस्मिताको बयानले हामी निर्दोषसावित भैसक्यौ, प्रहरीसँग भएको भिडियो कसरी बाहिरियो ?’
रवि प्रकरणको भिडियो कीर्ते गरेको पाइए के सजाँय हुन्छ ?
Prevकथा: हैसियतको प्रश्न
भारतका पूर्व वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीको निधनNext